एजेन्सी जेठ ७, २०७६ | मंगलबार
के तपाई ईन्टरनेट चलाउनु हुन्छ ? वेलावेला इन्टरनेट ढिलो चलेर हैरान पनि हुनु भएको छ होला । यदि छ भने तपाईंलाई थाहा छ संसारमा सबैभन्दा छिटो ईन्टरनेट कहाँ चल्छ र कसले प्रयोग गर्छ ? संसारमा सबैभन्दा सुपर फास्ट ईन्टरनेट अमेरिकाको नाशाले प्रयोग गर्छ । नाशा अमेरिक...
काठमाडौं । सरकारले आज (सोमवार)बाट ‘नेटवर्क ब्याकबोन’ तयार गर्ने लक्ष्यकासाथ अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै छ । सरकारको डिजिटल नेपाल बनाउने योजना साकार पार्न आजबाट अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन लागिएको हो । सोमवार बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्म...
अनलाइन सपिङ वेबसाइट अमेजन बहिष्कार गर्न आह्वान
एजेन्सी । अनलाइन सपिङ वेबसाइट अमेजनले हिन्दू देवी–देवताको फोटो भएको जुत्ता र ट्वाइलेट सिट–कभर बेचिरहेको छ । यसको भारतीय समाजिक सञ्जालमा ठूलो विरोध भइरहेको छ । बिहीवार भारतीय सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ता माझ ‘ह्यासट्यग बोयकट–अमेजन (...
एजेन्सी । बालबालिकाको रोजाइमा पर्ने कार्टुन नेटवर्कका वेबसाइटहरु भटाभट ह्याक हुन थालेपछि विश्वका १६ देशमा ठूलै विवाद मच्चिएको छ । ब्राजिलका दुई हयाकरले कार्टुन नेटवर्कका वेबसाइटहरु ह्याक गरेर पोर्न भिडियो अप्लोड गरेपछि यस्तो हंगामा मच्चिएको हो । ह्याकरले जर्मनी, ...
काठमाडौं । तपाईं कतै नियम विपरित सिमकार्ड बिक्री वितरण गरिरहनुभएको छैन नी ? सिम कार्ड बिक्री वितरणलाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ त्यो काम आजबाटै छाड्नुहोस् । नत्र प्रहरीको फन्दामा पर्नसक्नुहुन्छ । प्रहरीले नियम विपरीत सिमकार्ड बिक्री–वितरण गर्ने दुई जनालाई प...
‘लो लाइट फोटोग्राफी’मा नयाँ आयाम थप्दै ओपोद्वारा नेपालमा एफ११ प्रो सार्वजनिक
काठमाडौं । ओपोले आफ्नो एफ सिरिज पोर्टफोलियो अन्तर्गत नेपालमा नयाँ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एक वृहत समारोहको आयोजना गर्दै ओपो एफ११ प्रो सार्वजनिक गरेको हो । कम प्रकाश भएका स्थानमा समेत उत्कृष्ट तस्वीर खिच्ने क्षमता लगायत अन्य नवप्रबर्तनात्मक प्रविधि फोनमा सम...
लोकपथ संवाददाता बैशाख ८, २०७६ | आइतबार
काठमाडौं । एनसेलले माध्यमिक शिक्षा (एसईई)को परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै पहिलो सिम अफर प्रस्तुत गरेको छ । एनसेलले एसईईका विद्यार्थीलाई एक रुपैयाँमै सिम उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको हो । सिममा दिन र रातको डाटा प्याकहरु, प्रत्येक पटकक...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पब्जीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । शुक्रवारर न्यायधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता न...
काठमाडौं । नेपालले भू–उपग्रहमा अन्तरिक्ष पठाएको छ । बिहीवार बिहान २ः३१ बजे अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको भू–उपग्रह (नेपालीस्याट–१) अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको हो । यसको तौल झण्डै एक किलो छ । नेपाली भू–उपग्रहलाई ...
काठमाडौं । भारतमा लोकप्रिय भिडियो एप टिकटक ब्लक भएको छ । भारत सरकारको आग्रहमा एप्पल र गुगलले प्ले स्टोरबाट टिकटक एपलाई भारतमा हटाइएको हो । यो सँगै नयाँ प्रयोगकर्ताले टिकटक डाउनलोड गर्न सक्ने छैनन् । मद्रास उच्च अदालतले भारत सरकारलाई यो एपमाथि प्...
जब एलेक्जेन्डर रिन्केले आफ्नो सानो स्टार्ट अप बिजनेसमा ठूला कम्पनीहरुले लगानी गरुन् भन्ने चाहे तब उनलाई आफ्ना कुरा ती कम्पनीसम्म पु-याउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम लाग्यो, ‘हस्तलिखित पत्र’। इन्टरनेटको जमानामा सजिलो र छिटो तरिकाले सन्देश पठाउनुको साटो उनले झन्झटिल...
एजेन्सी । फेसबुकले श्वेत राष्ट्रवाद र पृथकतावादी समर्थित सबै प्रकारका फेसबुक र इन्स्टाग्रा एकाउण्ट बन्द गर्ने भएको छ । फेसबुकले आगामी सातादेखि फेसबुक र इन्स्टाग्रा एकाउन्ट बन्द गर्ने जनाएको हो । साथै फेसबुकले आतंकवादी गतिविधि पहिचान गर्ने क्षमता बढाउने ...
राजविराज । यही चैत १० गतेबाट शुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अन्तर्गत सप्तरी जिल्लामा भने चिट चोर्ने क्रियाकलाप रोकिएको छैन । बढ्दो सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिका कारणले चिट चोर्ने क्रियाकतापमा पनि परिवर्तन आएको छ । सप्तरी जिल्लाका विभिन्न परीक्षा ...
एजेन्सी चैत ५, २०७५ | मंगलबार
एजेन्सी । जर्मनीले अति तीव्र गतिको पाँचौं पुस्ताको दूरसञ्चार नेटवर्क (फाइभ–जी) को फ्रिक्वेन्सी लिलामीमा राखेको जनाएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले उक्त फ्रिक्वेन्सी खरिदमा राखेका शर्तहरु तथा चीनको हुवावे कम्पनीले उपकरण आपूर्ति गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने बारेमा...
फेसबुक प्रयोगकर्तालाई आफ्नो फेसबुक डिलिट गर्न ह्वाट्सएप संस्थापकको अपिल
एजेन्सी । फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुलाई आफ्नो फेसबुक अकाउण्ट डिलिट गर्न मेसेजिङ्ग एप ह्वाट्सएपले अपिल गरेको छ । फेसबुक स्वामित्वको लोकप्रिय मेसेजिङ्ग एप ह्वाट्सएपका सह–सस्थापक ब्रायन ऐक्टनले फेसबुक प्रयोगकर्तालाई यस्तो अपिल गरेका हुन् । यो समयमा ह्वाट्सएपको...
गोपनियता अरुलाई नसुम्पेको राम्रो, यस्ता छन् टिकटकका नोक्सानी
कलाकारिताको मिनी थिएटर हो, टिक-टक । कतै घुम्नजादाँ ह्या यतिकै जान्छु भनेर कुनै तयारी नगरी घरबाट बाहिर निस्कनेहरु पनि टिक–टक बनाउनको लागि धेरै मिहेनत र खर्च गर्ने गरेका पछिल्लो समयका युवा पुस्ताले । नेपालमा फेसबुक अनि इन्स्टाग्राम र अहिले ट...
बाजुरा । जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिकाका नौ वटै वडाबाट प्रविधिमैत्री सेवा सहितको कामकाज शुरु भएको छ । सेवाग्राहीलाई प्रविधिमैत्री र छिटोछरितो सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नका लागि जिल्लामै पहिलोपटक बडिमालिका नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा इन्टरनेट सुविधा जडान गरेको...
काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटर बन्द गर्नेबारे कुनै तयारी नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ । सूचना विभागको नाम राखी फेसबुक र ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिन लागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण पोस्ट गरिएको पाइएको भन्दै सूचना तथा सञ्चा...
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुनैपर्ने बताएका हुन् । उनले ...
लोकपथ संवाददाता फागुन ९, २०७५ | बिहिबार
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर कोही कसैलाई जिस्क्याउने वा होच्याउने गर्नुभएको छ ? वा रमाइलो त हो नि भन्दै विद्युतीय माध्यममा कोही कसैको अपमान त गर्नुभएको छैन ? यदि त्यसो गर्नुभएको छ भने अब तपाइँलाई कडा कारवाही हुन सक्छ । रमाइलोको लागि त ह...